Ibsa Gaazexaa Adda Bilisummaa Oromoo Irraa – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooIbsa Gaazexaa Adda Bilisummaa Oromoo Irraa
Hidhaan Jumlaa (Mass – Arrest),
Ajjeechaan Namoota Meesha-maleeyyii,
Ummata Addaa Qoodanii Tajaajila Qunnamtii Irraa Kutuun,
Barattoota Addaan Qoodanii Barnoota Irraa Arhuun,
Bulchiinsi Waraanaa (Command Post) fi
Walumaagala Hacuuccaan Siyaasaa Jal-bultii Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa Kan Bara 2020tti Oromiyaa Irratti Babal’achaa Jiru Guddoo Nu Yaaddessa !
Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa wajjiin waliigaltee araaraa irra gahuudhaan biyya tana keessatti Bilisummaa Ummatootaa fi ijaarsa sirna dimokiraasii dhugoomsuuf sochii siyaasaa karaa nagaa erga jalqabee waggaa tokkoo fi baatii 5 tahee jira. Erga waraqaa ragaa seera-qabeessummaa Boordii Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa irraa argatee garuu reefuu baatii 3 guuta. Yeroo dabarsine kana keessatti gama mootummaa fi Paartii biyya bulchuutiin dhiibbaaleen siyaasaa hin barbaachisne nu irra gahaa turuu yeroo adda addaatti sagalee keenya dhageessifachaa turuun keenya ni yaadatama. Kanuma waliin dhiibbaa bifa gara garaatiin nu irra gahaa ture hundaa obsaa fi bilchinaan qabnee mootummaa fi paartii biyya bulchus tahe qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin mariidhaan furmaata itti barbaadaa as geenyee jirra. Rakkinoota siyaasaa jiraniif furmaata irra wayyaa tahuu kan danda’u filannoo haqaa fi dimokiraatawaa kan Ummatootni bilisa tahanii bakka bu’oota isaanii sadarkaa hundaa itti filatan gaggeessuu dha jennee waan amannuuf Filannoon Biyyoolessaa Itoophiyaa kan bara 2020 inni fuula keenya dura jiru filannoo akkasii akka tahuuf qooda gama keenyaa bahachuuf hojjechaa jirra.
Akkuma beekamu Boordiin Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaatis Filannoo bara kana gaggeeffamuuf jiruuf tartiibaa fi sagantaa yeroo hojiileen filannoo kanaa itti xumuramuu qaban (Election Time Table) ifa godhee jira. Yeroo saganteeffame kana keessatti qophii nu irraa eegamu hunda xumurannee Filannoo kanatti hirmaachuuf gama keenyaan waan gochuu qabnu hundaa gochaa kan jiru tahu illee rakkoon gama mootummaatiin miseensotaa fi deggertoota keenya irra geessifamu garuu guyyaa irraa guyyaatti hammaachaa fi dabalaa deemuutti jira.
Lafoota bulchiinsa waraanaa (Command Post) jala jiran kana hundattuu bilisummaan sochii mirgi lammiilee daangeffamaa tahuutti dabalee Godinoota akka Qellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa fi Godinoota Gujii lamaan keessatti lola sababa godhachuudhaan ajjeechaan, hidhaan, saaminsi, manaa fi qabeenya ummataa gubuu fi balleessuun … fi kkf. lammiilee nagaa (meesha – maleeyyii) irratti gaggeessuun kan yeroo kamuu caalaa hammaatee jireenya Ummata keenyaa gidiraa hamaa keessa galchee jira. Hundaa olitti ammoo Godinoota lamaan Qellem Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa irraa mootummaan tajaajila qunnamtii akka telefoonaa fi interneetii guutummaatti erga kutee baatii 1 fi walakkaa caalee waan jiruuf yeroo kana keessatti waan naannoo sanatti tahaa jiru beekuun dadhabamee jira. (Dhimma kana ilaalchisuudhaan jalqaba baatii kanaa gaafa Gurraandhala 1 2020 Ibsa baasuun keenya ni yaadatama) Haa tahu malee haalli sun ammas akkuma itti fufetti jira. Yeroo ammaa kanatti ammoo rakkinni tajaajila qunnamtii akka internet Ummata irraa kutuu lafoota Finfinnee irraa gama Dhihaa jiran hedduutti babal’achaa jira.
Rakkinni Command Post haala kanaan osoo jiruu, dhiheenya kana ammoo Godinoota Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti sababaa nuti hin beekneen hidhaan jumlaa (mass – arrest) miseensotaa fi deggertoota Dhaaba keenyaa irratti bal’inaan gaggeeffamuu eegalee jira. Qaamni hidhaa jumlaa kana gaggeessaa jiru Poolisii Oromiyaa tahuunis beekamee jira. Hidhaan jumlaa kun bal’inaan kan itti hammaachaa jiru lafoota Godina Addaa Naannawa Finfinnee jedhamuun beekaman keessatti tahuunis hubatamee jira. Akka kanaan torban tokkoo asitti qofa miseensotaa fi deggertoota keenya kanneen bakkoota addaa addaa (Godinoota Oromiyaa 7 fi Onootaa fi Bulchiinsa Magaalaa 26) irraa jumlaadhaan hidhaman keessaa yoo xiqqaate kan odeessi isaanii hanga ammaatti nu dhaqqabe lakkoofsaan namoota 350 caalan oggaa tahan isaan keessaa kanneen hanga ammaatti tarrisa maqaa isaanii arganne namootni 174 kanneen armaan gadii tahu:
I. Godina Addaa Naannawaa Finfinnee
Namootni 56 hidhamuu kan mirkaneeffanne oggaa tahu kan maqaa isaanii arganne
Namootni hidhaman lakkoofsaan 150 ol oggaa tahan kan maqaan isaanii nu dhaqqabe
Namoota 24 hidhamuu mirkaneeffanne keessaa maqaan namootaa arganne
Magaalaa Caancoo Irraa:
Namootni hidhaman hedduu tahanis maqaan ammaaf arganne
II. Godina Lixa Shawaa
Magaalaa Amboo Irraa:
Namoota hidhaman keessaa kan maqaan nu dhaqqabe
Ada’aa Bargaa Irraa:
III. Godina Kaaba Shawaa
Namootni 17 hidhamuu mirkaneeffannus maqaan isaanii nu hin dhaqqabne.
Abuunaa Gindabarat Irraa:
Namootni 5 hidhamuu mirkaneeffannus maqaan isaanii nu hin dhaqqabne.
IV. Godina Horroo-Guduruu Wallaggaa
Baay’isaa Guddallee Reebicha hamaan kan miidhame
V. Godina Iluu Abbaa Booraa
Magaalaa Mattuu Irraa:
VI. Godina Baalee
Magaalaa Roobee Irraa:
VII. Godina Lixa Harargee Irraa:
Ona Gammachiis Irraa:
Godina Lixa Harargee Ona Doobbaa magaalaa Biyyoo Karaabaatti Gaafa 10/02/2020tti Poolisootni Oromiyaa dargaggoota hedduu jumlaan reebuudhaan miidhaa gurguddaa irraan gahanii jiran. Waajjira ABO kan magaalaa kanaatis cufanii jiran.
Odeeffannoon kun deggertoota, miseensotaa fi qondaalota Dhaaba keenyaa kanneen duraan Finfinnee fi iddoo adda addaatti hidhamanii jiran hin dabalatu. Rakkina kanaaf furmaata barbaaduuf yeroo adda addaatti boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaadhaan beeksisuutti dabalee qaamota mootummaa dhimmi ilaalu waliinis waltajjiilee carraan itti argame hundatti wal hubannoo feesisu uumuuf gama keenyaan of qusannee hin beeknu.
Yeroo ammaa kan jal-bultii filannoo biyyoolessaa kan bara 2020 irra jirrutti Oromiyaa keessaatti rakkinootni turan furamanii haalli nageenyaa fi bilisummaan sochii humnoota siyaasaas tahe kan lammiilee hundaa wayyoomina agarsiisaa deemuun hafee daranumaa hammaachaa deemee sadarkaa kana gahuun isaa yaaddoo guddaa nutti bulchee jira.
Waan taheef, ammas osoo abdii hin kutanne irra deddeebinee gaafatamni guddaan kan irra jiru mootummaan rakkina kana babal’isuu dhiisee furmaata itti barbaaduuf akka hojjetu jabeessinee gaafanna. Kanaaf akka gargaaruufis:
Hidhaan jumlaa kun hatattamaan akka dhaabbatu.
Kanneen hidhamanii jiran hundi mirgi isaanii kabajameefii hatattamaanii fi karaa haqa-qabeessa taheen murtii seeraa akka argatan.
Tajaajilli qunnamtii yeroo dheeraaf muramee wal qunnamtiin Ummataa dhabamuun Ummata dheekkamsiisee miira aariitiin gara hin feesisnetti dhiibuu waan danda’uuf tajaajilli qunnamtii murame dafee akka bakkatti deebi’u,
Bulchiinsi Waraanaa (Command Post) seeraan hin labsaminii fi yeroon itti xumuramus hin beekamne Ummata keenya gidiraa hamaaf saaxilee waan jiruuf hatattamaan akka kaafamuu fi ajjeechaan lammiilee nagaa (meesh-maleeyyii) irratti gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka Ummata keenya irraa dhaabbatu.
Boordiin Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa kallattiidhaan gaafatama Filannoo Biyyoolessaa itti deemnu kana fiixaan baasuu waan qabuuf haala gufachiisaa jal-bultii filannichaatti mul’achaa jiru kana qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin hojjetee furmaata argamsiisuuf gaafatama isaa akka bahatu gaafanna.
Komishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa dhiittaa mirga dhala namaa Oromiyaa keessatti bal’inaan gaggeeffamaa jiru kana hordofuudhaan gabaasaa barbaachisu dhiheessuutti akka hin jirre argaa jirra. Qaamni kunis gaafatama isaa bahachuu akka qabu yaadachiisna.
Mootummootni aangawoo fi kanneen waahillan Itoophiyaa warri dimokiraasiin biyya kana keessatti akka lafa qabatuuf tin’isa adda addaa gochaa jiran haalli Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kan karaa irraa jallatee fi faallaa dimokiraasii waan taheef mootummaa Itoophiyaa gorsuu fi dhiibbaa ijaaraa feesisu hunda gochuudhaan haalli kun akka sirrattu taasisuuf gahee isaanii akka bahatan yaadachiisna.
Komishiniin sadarkaa Afrikaatti qabaa mirgoota dhala namaa fi Ummatootaa hordofu (African Commission on Human and People’s Right) akkuma biyyoota Afrikaa biroo irratti hordoffii taasisu adeemsa faallaa dimokiraasii Itoophiyaa keessatti babal’achaa jiru kana hordofuudhaan akka gabaasuu fi qooda isa irraa eegamu akka bahatu yaadachiisna.
Oromiyaattis tahe guutuu biyyaatti nageenyaa fi tasgabbiin uumamee Filannoo biyyoolessaa kan bara 2020 fuul-dura keenya jiru irratti Ummatootni bilisa tahanii bakka bu’oota isaanii filachuudhaan mootummaan Ummataa akka hundeeffamuuf mootummaa aangoo irra jiru dabalatee kanneen dhimmi ilaalu hundi gaafatama keenya akka bahannu waamicha goona.
Qaamotni adda addaa kanneen rakkinoota mul’atan kana hubachiisuu fi furmaata argamsiisuu keessatti qooda kennuu danda’an (Dhaabbattootni mirga dhala namaaf falman kan olitti maqaa dhawamanii kan kanneen biroos, miidiyaalee fi gaazexeessitootni, namootni fi qaamotni dhiibbaa ijaaraa gochuu danda’an) hundi haala kana fardeessanii akka jala bu’anii fi karaa ijaaraa taheen gahee isaanii akka bahatanis cimsinee gaafanna. Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin rakkinoonti jiran hundi furmaata waaraa akka argataniif waan isa irraa eegamu hunda kan godhu tahuu mirkaneessina.
Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (OLF Press Conference) - March 19, 2020
Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (OLF Press Conference) - March 19, 2020 [SBO - Bitootessa 19,2020]…
Ibsa Ejjennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waliigalaa Irraa kenname Ebla 30, 2020, Finfinnee Oromiyaa QBO Qabsoo…